एल् Cotopaxi, क्विटो बाट एक महान यात्रा यात्रा समाचार
कोटोपाक्सी ज्वालामुखी, क्विटोबाट ठूलो भ्रमण
एनरिक गिलि | | इक्वेडर, क्युटो
इक्वेडरमा सामान्यतया मानिसहरू पृथ्वीको अन्तिम प्रमोदवन गलापागोस टापुहरू भ्रमण गर्न त्यसो गर्छन्। एन्डियन देश अझै पनि युरोपियन पर्यटनमा कम परिचित छ र यो शर्मको कुरा हो किनभने मुख्य भूमि असाधारण सौन्दर्यको छ र यसले धेरै प्रस्ताव पनि राखेको छ।
आज म प्रस्ताव गर्छु क्विटोबाट आरोहण, Cotopaxi को आरोहण। यो एक अनुभव हो जुन मैले निश्चित रूपमा सिफारिस गर्दछु यदि तपाईं इक्वेडरको भ्रमण गर्नुहुन्छ भने. तपाईं निराश हुनुहुने छैन (यदि ज्वालामुखी क्रियाले यसलाई अनुमति दिनेछ)।
धेरै यात्राहरू, जस्तै मैले तल एउटा विस्तृत रूपमा भनेको क्विटो वा लाटाचुंगाबाट सुरू गरेर उसी दिन फिर्ता गर्न सकिन्छ।
कोटोपाक्सी ज्वालामुखी (5897 XNUMX XNUMX mas मासल) भव्यतामा उगन्छ राजधानीबाट केवल km० किमी र लाटाकुंगाबाट from 50 किलोमिटर। यो देशको दोस्रो उच्च ज्वालामुखी हो र विश्वमा सब भन्दा उच्च सक्रिय ज्वालामुखी हो।
1 कोटोपाक्सी ज्वालामुखी कसरी पहुँच गर्ने?
2 Cotopaxi मा के गर्ने र के हेर्ने?
3 डाउनहिल र माउन्टेन बाइकमा अन्वेषण!
कोटोपाक्सी ज्वालामुखी कसरी पहुँच गर्ने?
Cotopaxi राष्ट्रीय पार्क को भ्रमण र प्रवेश गर्न विशेष एजेन्सीको सेवा भाँडामा लिन आवश्यक छ। यसलाई ध्यानमा राख्नुपर्दछ, र यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, कि क्विटो र राष्ट्रिय पार्क दुबै २,2500०० मिटर भन्दा अधिकको उचाईमा अवस्थित छन् र अन्तिम पोइन्ट जहाँ कार वा भ्यानसम्म पुग्न सकिन्छ लगभग ,,२०० मिटर छ। उचाई बिरामी विचार गर्न एक कारक हो भ्रमण गर्नु अघि।
हामीले माथि जानु भन्दा पहिले केहि दिनहरुमा प्रशस्त हुनुपर्दछ, समुद्री तहको शहरबाट कोटोपाक्सीमा सिधा जानु स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन सक्छ।
म तपाईंलाई पानीको एक बोतल, पहाडको कपडा र जुत्ता, ग्लोभ र सबै भन्दा माथि ल्याउन सिफारिस गर्दछु: अत्यधिक प्रयास नगर्नुहोस्। यो सजिलो तर ढिलो चढाई हो, 4200२०० मिटर उचाईमा यो एकदमै ढिलो जान्छ, नफर्काउनुहोस्।
त्यहाँ छन् यसलाई पहुँच गर्न दुई मुख्य विकल्पहरू:
मा यात्रा गर्नुहोस् क्विटो / लाटाकुंगा बाट पहुँच सडकमा सार्वजनिक वा निजी यातायात Pan- अमेरिकी राजमार्गमा पार्क। त्यहाँ एकचोटि हामी भेटघाट गर्न सक्ने थुप्रै × cars कारहरू फेला पार्यौं। तिनीहरू पहुँचको अधिकारको साथ एजेन्सीहरू हुनु पर्छ। यो पक्कै पनि सस्तो (प्रति व्यक्ति $4प्रति व्यक्ति) र ईम्प्रोभाइज्ड तरिका हो, तर यसले अधिक समय खेर फाल्छ। विशेष अनुमति वा गाइडहरूको आवश्यकता बिना अन्तिम पहुँचयोग्य पोइन्ट Cotopaxi भिजिटर सेन्टर हो।
क्विटो / लाटाकुंगा बाट मार्ग भाडामा लिनुहोस्। एजेन्सीहरूले ड्राइभर र माउन्टेन गाइडका साथ × × v व्यानहरू प्रस्ताव गर्छन्। सामान्यतया भ्रमण सोही दिनमा गरिन्छ र यसले ज्वालामुखी तल झर्न खाना र साइकल समावेश गर्दछ। गाइड चार महत्वपूर्ण स important्केत दिन, ज्वालामुखीको इतिहास र यसको राष्ट्रिय पार्कको जिम्मामा छन्। लागत आसपास हुनु पर्छ प्रति व्यक्ति $ to$ देखि $ ०.
म व्यक्तिगत रूपमा क्विटोबाट भ्रमण भाडामा लिन सिफारिस गर्दछु। यो सम्भवत धेरै महँगो छ, तर बिहान 8 बजेतिर ११ बजेतिर जान्छु तपाईलाई राष्ट्रिय पार्कको बीचमा भेट्नुहुनेछ। खाना खाने समयबाट तपाईं शहरमा फर्कनुहुनेछ। अर्कोतर्फ, ज्वालामुखी मार्फत माउन्टेन बाइकबाट सुरु भएको १००% सिफारिश गरिएको छ।
शिखरमा चढ्न कम्तिमा २ दिन चाहिन्छ, हिमनदीको सुरूमा चढाई उहि दिनमा गर्न सकिन्छ।
Cotopaxi मा के गर्ने र के हेर्ने?
यदि मौसम र ज्वालामुखीले यसलाई अनुमति दियो भने, तपाईं अन्तिम पार्किंगमा पुग्न सक्नुहुनेछ, 4200२०० मिटरको उचाईमा अवस्थित। त्यहाँ तपाईंले निश्चित रूपमा तापक्रम र उचाईमा परिवर्तन देख्नुहुनेछ।
गाईडले हामीलाई भन्नेछ कि सर्तहरू चढ्न इष्टतम हो र हामी कति टाढासम्म पुग्न सक्छौं। यो सबै समयमा तिनीहरूको सिफारिसहरू अनुसरण गर्न आवश्यक छ।
यस बिन्दुबाट हामी पहिले नै देख्यौं उच्च पर्वत शरणस्थल, समुद्र सतहबाट लगभग almost 4900०० मिटर माथि अवस्थित छ र ठ्याक्क हिमनदी पछाडि सुरू हुन्छ।
राम्रो ढाँचाको साथ राम्रो चिनो लगाइएको बाटोले हामीलाई बाँकी /००/600०० मिटर चढ्न मार्गदर्शन गर्दछ। सिद्धान्तमा १ घण्टा वा एक घण्टा र आधामा तपाइँ शरणमा पुग्नु पर्छ।
जमिन स्वाभाविक रूपमा ज्वालामुखी र फिसलन छ। धेरै चोटि दुईवटा चरणहरू माथि जानको लागि लिन्छन् र त्यसो गर्न इच्छा नगरी अरू तीनलाई कम गरिन्छ। यो धैर्य हुनु आवश्यक छ, दौडिन र अलि अलि अगाडि बढ्नको लागि। पानी निरन्तर पिउन र उचाईको लागि अनुकूलन गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
यदि सबै ठिक भएमा, एक घण्टा पछि हामी शरणमा आइपुग्नेछौं जहाँ हामी तलका दृश्य दृश्यहरू चिन्तन गर्न सक्छौं (राष्ट्रिय निकुञ्ज, लग्नेहरू र एन्डियन प्लेटफर्म) र माथि (Cotopaxi हिमनदी र क्रेटर)। यहाँ एक पटक हामी उपलब्ध समय, शारीरिक अवस्था र मौसममा निर्भर गर्दै धेरै निर्णय गर्न सक्छौं:
माथि नहाल्नुहोस् र फेरि पार्कि lotमा जानुहोस्।
हिमनदीको सुरुवातमा जानुहोस्, समुद्र सतहबाट ,,5300०० मिटर माथि। यो एक घण्टा भन्दा कम पैदल यात्रा हो र यो गर्न सकिन्छ कि हामी शरणस्थानमा सुतेर बसेका छौं वा यदि हामी सुरूवात बिन्दुमा फर्केका छौं।
क्रेटरमा चढ्नुहोस्। यस अवस्थामा हामीले जाँच गर्नुपर्नेछ कि हामी शारीरिक रूपमा जान सक्दछौं र अर्को तर्फ हामीले शरणमा रात बिताउनुपर्नेछ, तपाईं एकै दिनमा सबै गर्न सक्नुहुन्न।
डाउनहिल र माउन्टेन बाइकमा अन्वेषण!
यदि हामी भ्यान र साइकल लिएर आएका छौं, हामी पूर्ण रूपमा माउन्टेन बाइकको साथ पार्कि lotबाट बाटो फिर्ता बनाउन सिफारिस गर्दछौं। 1२०० मिटरबाट 4200 3500०० सम्म लगभग करीव १ घण्टा निरन्तर वंश।
अविश्वसनीय परिदृश्यहरू, प्रकृति यसको भव्यतामा सबै मार्गमा। मिलान गर्न स्वतन्त्रताको भावना गाह्रो।
गाईडले तपाईंलाई तल झार्ने काम कहाँ हुन्छ भनेर देखाउँदछ। त्यहाँबाट, तपाईं साइकल द्वारा सम्पूर्ण Cotopaxi राष्ट्रीय पार्क अन्वेषण गर्न सक्नुहुन्छ। समतल भूमिहरू, प्रकृति र रमणीय दृश्यहरू हाम्रो हिड्न हावी हुनेछन्।
एक पटक हाम्रो बाइक यात्रा सकियो, यो समय हाम्रो शुरुवात बिन्दुमा फर्कने छ।
प्रकृति प्रेमीहरूको लागि, कोटोपाक्सी ज्वालामुखीको आरोहणको लागि सिफारिश गरिएको र सजिलै पहुँचयोग्य भ्रमण हो यदि हामी क्विटोको लागि यात्रा गर्यौं भने। इक्वेडरियन एन्डिस दर्शनीय छन् र त्यहाँ सबै स्वादका लागि मार्गहरू छन्, तर यो आवश्यक छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » अमेरिका » इक्वेडर » कोटोपाक्सी ज्वालामुखी, क्विटोबाट ठूलो भ्रमण
डेन्यूब नदीमा क्रूज लिनुहोस्